Scholes, Giggs iyo Ferdinand oo ka tegaya Man Utd. - Caasimada Online
Home Warar Scholes, Giggs iyo Ferdinand oo ka tegaya Man Utd.
Scholes, Giggs iyo Ferdinand oo ka tegaya Man Utd.
Paul Scholes ayaa qorsheynaya inuu gabi ahaanba ka fariisto kubada cagta dhamaadka xilli ciyaareedka iyadoo Manchester United Sir Alex Ferguson uu xilli ciyaareed kale oo la yaab leh ka dhigayo Old Trafford, sida uu qoray Mail on Sunday.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda United Scholes ayaa u sheegay saxiixbadiis inuu bisha May ciyaaraha ka fariisan doono uusan dib ugu soo laaban doonin.
Ferguson ayaa sidoo kale wajahaya inuu waayo halyeey kale, Ryan Giggs, ayaa ka tegi doona kooxdiisii uu mustaqbalkiisa oo dhan usoo ciyaarayey xagaaga, tababaraha ayaana ogeyn hadii ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara Rio Ferdinand uu kooxda qandaraaska u kordhinayo.